मनकामनामा मन्दिर जादैहुनुहुन्छ ? सावधान भुस्याहा कुकुरले टोक्ला –
मनकामनामा मन्दिर जादैहुनुहुन्छ ? सावधान भुस्याहा कुकुरले टोक्ला
गोरखा – देशकै धार्मिक तथा ऐतिहासिक तिर्थस्थल गोरखाको मनकामनामा भुस्याहा कुकुरले भक्तजनलाई टोक्न थाले पछि सबै त्रसित भएका छन । कुकुरलाई भने आजै स्थानियले नियन्त्रणमा लिएर मारीदिएका छन ।
स्थानियले दिएको जानकारी अनुसार २ दिनमा ७ जना भन्दा बढीलाई भुस्याहा कुकुरले टोकि सकेको छ । ‘ आफुले धेरै पहिले देखी मनकामना क्षेत्र भित्र रहेको घर पालुवा र भुस्याहा कुकुरलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी चौकी, उद्योग बाणिज्य संघ र वडा कार्याललाई भनेको तर वास्ता नगर्दा अहिले यो परिणाम आएको’ मनकामनाका मुल पुजारी ईन्सानबहादुर थापाले बताए ।
सोमबार सम्ममा मनकामना मन्दिरका कर्मचारी १ जना, बोर्डिङका ३ जना बिद्यार्थी र ४ जना भत्तजनलाई कुकुरले टोकी सकेको छ । पुजारी थापाका अनुसार मन्दिरमा दिईने बलीको रगतका कारण कुकुर आकर्षित हुने र त्यहाँ आई पुगेको कुकुर फिर्ता नजाने गरेका कारण अहिले मनकामना क्षेत्रमा सयौ कुकुर रहेका छन ।
त्यस माथि पनि घर पालुवा कुकुर समेत छाडा छाडीदिदाँ समस्या भएको छ । सोमबार नै मारिएको कुकुरले अरु कति कुकुर र मानिसलाई टोकी सक्यो भन्ने यंकिन जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।
सोमबार कुकुरले टोकेका सबै भक्तजन बाहिरका भएकाले उनीहरुले कहाँ उपचार गरे भन्ने कुरा थाहा हुन सकेको छैन । तर स्थानिय सबैले भने तनहुँको आँबुखैरेनीमा भ्याक्सीन लगाई रहेका छन ।
कुकुरले आतंक मच्चाएको बिषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी उपरिक्षक ओमप्रकाश अधिकारी भने अनविज्ञता जनाए । ‘कुकुरले टोकेको बिषयमा मनकामना प्रहरी चौकी बाट केही पनि जानकारी नआएकोले आफुले बुझने’ बताए ।
« भू–जडित देशको रुपमा विश्व रंगमञ्चमा नेपालले आफ्नो भूमिकालाई स्थापित : ईश्वर पोखरेल
देश समृद्ध हुन हरेक समुदाय, वर्ग, लिंग समृद्ध हुनुपर्ने : उपराष्ट्रपति »